June 2020 - Page2of 45 - ShwengweGames
ကုန်ကျစရိတ်တွေသိပ်များလို့ အလုပ်တစ်ခုတည်းနဲ့ မကာမိတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာအပိုဝင်ငွေရှာနိုင်မယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း (၅) မျိုး
လူတိုင်းဟာကိုယ့်ကျွမ်းကျင်မှု နဲ့အခြေအနေပေါ် လိုက်ပြီးစားဝတ်နေရေးကိုပြည့်စုံအောင်ဖန်တီးနေကြတာပါ။အခုလိုကုန် ကျစရိတ်တွေသိပ်များလို့အလုပ်တစ်ခုတည်းနဲ့ မကာမိတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ အပိုဝင်ငွေရမယ့်အချိန်ပိုင်းအလုပ်က လေးတွေရှိတာပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။အပိုဝင်ငွေရနိုင်မယ့်အလုပ်ဆိုတာ နာမည်အတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ပိုနေတဲ့အချိန်ကို ငွေအဖြစ်ပြောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချို့အပိုဝင်ငွေရှာဖို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကအလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ အရင်းအနှီးတစ်ချို့လိုပါတယ်။တစ်ချို့ အပိုဝင်ငွေလုပ်ငန်းတွေအတွက်အတတ် ပညာနဲ့ငွေအရင်းအနှီးမလိုပါဘူး။အပိုဝင်ငွေရှာဖို့အကောင်းဆုံးအလုပ်တစ်ချို့ ရှိပါတယ်။
(၁) YouTube ချန်နယ်လေးဖွင့်ပါ
ကိုယ့်ရဲ့ Skill တစ်ခုကိုအားလုံးသိအောင် ချပြပြီး ပိုက်ဆံရှာလို့ရပါတယ်။ ဒီထဲမှာ YouTube မှာချန်နယ်တစ်ခုထောင်ပြီး ငွေရှာတာလည်းပါပါတယ်။ YouTube မှာ သီချင်းတွေတီးပြတာမျိုး ၊အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်ပေးတာမျိုး ၊အင်တာနက်ပေါ်ကထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေအကြောင်းပြောပြတာမျိုးနဲ့ အသံ ထွက်စာအုပ်လေးတွေဖတ်ပြတာမျိုး ကိုယ့်အိုင်ဒီယာရှိရင်ရှိသလိုလုပ်လို့ရပါတယ်။
(၂) နိုင်ငံခြားပစ္စည်းတွေ ပြန်ရောင်းပါ
နိုင်ငံတကာ e-Commerce ဝက်ဘ်ဆိုက်ကြီးတွေ ဖြစ်တဲ့ Alibaba ၊ JD.Com ၊ Taobao နဲ့ Amazon တို့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး ကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာရှားတဲ့ပစ္စည်း‌လေးတွေဝယ်ရောင်းလုပ်တာမျိုးကလည်း အပိုရနိုင်ပါတယ်။ကိုယ်ပိုင် Facebook Pageတစ်ခုလောက်ထောင်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။တစ်ခါတစ်လေမှာသူများနိုင်ငံက ၅ ဒေါ်လာတန် ပစ္စည်းကိုဒီဘက်မှာ ဒေါ် လာ ၂၀-၃၀ နဲ့ ပြန်ရောင်းလို့ရပါတယ်။ e-Commerce တွေဆီကတိုက်ရိုက်ဝယ်လို့ရမယ့်အကောင့်တော့ရှိထားဖို့လိုမှာပါ။
အိမ်မှာနေပြီးလုပ်လို့ရတဲ့အပိုအလုပ်တစ်ခုကတော့အလွတ်တန်းအလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်က Coding Skill ကောင်းရင် အလွတ်တန်း Programmer /Developer အနေနဲ့ အပိုဝင်ငွေရှာလို့ရပါတယ်။ ဂရပ်ဖစ်ကျွမ်းကျင်ရင်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ ဒါမှမဟုတ် Illustrator လုပ်နိုင်ပါတယ်။‌ စာရေးကောင်းရင်အလွတ်တန်းစာရေးကောင်းသူလုပ်နိုင်ပါတယ်။
(၄) ကိုယ်ပိုင် Product လေးတွေ ဖန်တီးပါ
ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်လေးတွေဟာတကယ့်လုပ်ငန်းကြီးတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေကနေအနုပညာပစ္စည်းအထိကိုယ့်နာမည်နဲ့ ထုတ်နိုင်ရင်အခွင့်အလမ်းကတကယ့်ကိုအကြီးကြီး ဖြစ်သွားမှာပါ။တစ်ချို့တွေဆိုကိုယ့်ပိုင် Brand နဲ့ ဆပ်ပြာထုတ်တယ် ၊လွယ်အိတ်လေးတွေ ၊ကီးချိန်းလေးတွေကနေမုန့်မျိုးစုံအထိထုတ်လုပ်ပြီး ချမ်းသာသွားကြတာမျိုး ရှိပါတယ်။
တကယ်တော့ ပွဲစားပါပဲ။မတူတာက အခုနောက်ပိုင်းမှာအိမ်ခြံမြေအငှားချိတ်ဆက်ပေးသူကနေကမ္ဘာကျော်ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေမှာအသက်အာမခံအထိအေးဂျင့်တွေ ရှိပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းလုပ်သူတွေဟာအချိန်ပြည့်လုပ်စရာမလိုဘဲ ကိုယ်အားတဲ့အချိန်မှာဝင်လုပ်လည်း ရပါတယ်။သူတို့ကတော့ရောင်းရမှုပေါ် လိုက်ပြီးရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ကပြောတတ်ဆိုတတ်အချိတ်အဆက်ကောင်းရင်ဒီအလုပ်ကလည်းကိုက်ပါတယ်။
ကုန္က်စရိတ္ေတြသိပ္မ်ားလို႔ အလုပ္တစ္ခုတည္းနဲ႕ မကာမိတဲ့ ေခတ္ႀကီးမွာအပိုဝင္ေငြရွာနိုင္မယ့္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္း (၅) မ်ိဳး
လူတိုင္းဟာကိုယ့္ကြၽမ္းက်င္မႈ နဲ႕အေျခ အေနေပၚ လိုက္ၿပီးစားဝတ္ေနေရးကို ျပည့္စုံေအာင္ဖန္တီးေနၾကတာပါ။ အခုလိုကုန္က်စရိတ္ေတြသိပ္မ်ားလို႔ အလုပ္တစ္ခုတည္းနဲ႕ မကာမိတဲ့ ေခတ္ႀကီးမွာ အပိုဝင္ေငြရမယ့္အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္က ေလးေတြရွိတာပိုၿပီးအဆင္ေျပပါတယ္။အပိုဝင္ေငြရနိုင္မယ့္အလုပ္ဆိုတာ နာ မည္အတိုင္းကိုယ့္ရဲ႕ပိုေနတဲ့အခ်ိန္ကို ေငြအျဖစ္ေျပာင္းေပးတာျဖစ္ပါတယ္။တစ္ခ်ိဳ႕အပိုဝင္ေငြရွာဖို႔လုပ္တဲ့အလုပ္ေတြကအလုပ္အကိုင္ကြၽမ္းက်င္မႈနဲ႕ အရင္းအႏွီးတစ္ခ်ိဳ႕လိုပါတယ္။တစ္ခ်ိဳ႕ အပိုဝင္ေငြလုပ္ငန္းေတြအတြက္အတတ္ ပညာနဲ႕ေငြအရင္းအႏွီးမလိုပါဘူး။အပိုဝင္ေငြရွာဖို႔အေကာင္းဆုံးအလုပ္တစ္ခ်ိဳ႕ ရွိပါတယ္။
(၁) YouTube ခ်န္နယ္ေလးဖြင့္ပါ
ကိုယ့္ရဲ႕ Skill တစ္ခုကိုအားလုံးသိေအာင္ ခ်ျပၿပီး ပိုက္ဆံရွာလို႔ရပါတယ္။ ဒီထဲမွာ YouTube မွာခ်န္နယ္တစ္ခုေထာင္ၿပီး ေငြရွာတာလည္းပါပါတယ္။ YouTube မွာ သီခ်င္းေတြတီးျပတာမ်ိဳး၊အဂၤလိပ္စကားေျပာသင္ေပးတာမ်ိဳး ၊အင္တာနက္ေပၚကထူးဆန္းတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြအေၾကာင္းေျပာျပတာမ်ိဳးနဲ႕အသံထြက္စာအုပ္ေလးေတြဖတ္ျပတာမ်ိဳး ကိုယ့္အိုင္ဒီယာရွိရင္ရွိသလိုလုပ္လို႔ရပါတယ္။
(၂) နိုင္ငံျခားပစၥည္းေတြ ျပန္ေရာင္းပါ
နိုင္ငံတကာ e-Commerce ဝက္ဘ္ဆိုက္ႀကီးေတြ ျဖစ္တဲ့ Alibaba ၊ JD.Com ၊ Taobao နဲ႕ Amazon တို႔နဲ႕ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ကိုယ့္ျပည္တြင္းမွာရွားတဲ့ပစၥည္း‌ေလးေတြဝယ္ေရာင္းလုပ္တာမ်ိဳးကလည္း အပိုရနိုင္ပါတယ္။ကိုယ္ပိုင္ Facebook Pageတစ္ခုေလာက္ေထာင္ဖို႔ပဲလိုပါတယ္။တစ္ခါတစ္ေလမွာသူမ်ားနိုင္ငံက ၅ ေဒၚလာတန္ ပစၥည္းကိုဒီဘက္မွာ ေဒၚ လာ ၂၀-၃၀ နဲ႕ ျပန္ေရာင္းလို႔ရပါတယ္။ e-Commerce ေတြဆီကတိုက္ရိုက္ဝယ္လို႔ရမယ့္အေကာင့္ေတာ့ရွိထားဖို႔လိုမွာပါ။
အိမ္မွာေနၿပီးလုပ္လို႔ရတဲ့အပိုအလုပ္တစ္ခုကေတာ့အလြတ္တန္းအလုပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ကိုယ္ကCoding Skill ေကာင္းရင္ အလြတ္တန္း Programmer /Developer အေနနဲ႕ အပိုဝင္ေငြရွာလို႔ရပါတယ္။ ဂရပ္ဖစ္ကြၽမ္းက်င္ရင္ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္နာ ဒါမွမဟုတ္ Illustrator လုပ္နိုင္ပါတယ္။‌ စာ ေရးေကာင္းရင္အလြတ္တန္းစာေရးေကာင္းသူလုပ္နိုင္ပါတယ္။
(၄) ကိုယ္ပိုင္ Product ေလးေတြ ဖန္တီးပါ
ကိုယ္ပိုင္ထုတ္ကုန္ေလးေတြဟာတကယ့္လုပ္ငန္းႀကီးေတြျဖစ္သြားနိုင္ပါတယ္။အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းေလးေတြကေနအႏုပညာပစၥည္းအထိကိုယ့္နာမည္နဲ႕ ထုတ္နိုင္ရင္အခြင့္အလမ္းကတကယ့္ကိုအႀကီးႀကီး ျဖစ္သြားမွာပါ။တစ္ခ်ိဳ႕ေတြဆိုကိုယ့္ပိုင္ Brand နဲ႕ ဆပ္ျပာထုတ္တယ္ ၊လြယ္အိတ္ေလးေတြ ၊ကီးခ်ိန္းေလးေတြကေနမုန႔္မ်ိဳးစုံအထိထုတ္လုပ္ၿပီး ခ်မ္းသာသြားၾကတာမ်ိဳး ရွိပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ပြဲစားပါပဲ။မတူတာက အခုေနာက္ပိုင္းမွာအိမ္ၿခံေျမအငွားခ်ိတ္ဆက္ေပးသူကေနကမာၻေက်ာ္ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြမွာအသက္အာမခံအထိေအးဂ်င့္ေတြ ရွိပါတယ္။ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းလုပ္သူေတြဟာအခ်ိန္ျပည့္လုပ္စရာမလိုဘဲကိုယ္အားတဲ့အခ်ိန္မွာဝင္လုပ္လည္း ရပါတယ္။သူတို႔ ကေတာ့ေရာင္းရမႈေပၚ လိုက္ၿပီးရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႕ ရတာျဖစ္ပါတယ္။ကိုယ္ကေျပာတတ္ဆိုတတ္အခ်ိတ္အဆက္ေကာင္းရင္ဒီအလုပ္ကလည္းကိုက္ပါတယ္။
ကျောင်းစာသင်ဘူးသူတိုင်းသိတယ်။သင်္ဘောပြေးဆွဲရေးမှာ အင်္ဂလိပ်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ပြိုင်တယ်။သင်္ဘောစီးခကို အပြိုင် အဆိုင်လျှော့တယ်။အလကားတင်ပေးတယ်။လက်ဆောင်ပါပေးတယ်။
ဦးနာအောက်ရဲ့ အမျိုးသားစိတ်ဓာတ်ကို လေးစားပေမယ့်ခရီးသည်တွေကို အ မျိုးသားရေးချမပြနိုင်ဘူး။ခရီးသည်ကသာရာကပ်တယ်။နောက်တော့အင်အားတောင့်တင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကို မယှဉ်နိုင်တော့ပဲပြိုင်ဘက်ဆီလုပ်ငန်းလွှဲရောင်းလိုက်ရတယ်။
” အင်အားကြီးပြိုင်ဘက်ကို ထိပ်တိုက် မပြိုင်ပါနဲ့ ”
Dont Break The Wall With Your Head.
ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော် ၊ ခရီးသွားရင် လေယာဉ်သုံးစီး ၊ Bodyguard တွေနဲ့ ပွဲတစ်ပွဲဆိုပြီးရင်ဒေါ်လာသန်းချီရတယ်။ ဘာကိုမှမူစရာမလို။စိတ်ကြိုက် သုံးနိုင်တယ်။ကမ္ဘာပတ်နိုင်ခဲ့တယ်။
နောက်တော့ ကုမ္ပဏီစာရင်းတွေ ဘဏ်စာရင်းတွေရှုပ်လာပြီး ဒေဝါလီ ခံလိုက်ရတယ်။သုံးမကုန်တဲ့ငွေတွေဘယ်ရောက်သွားသလဲ။
စာရင်းဇယားမနိုင်သူ ၊ စာရင်းဇယားမရှိသူဟာဘယ်လောက်အောင်မြင်သော် လည်းကျရှုံးရတတ်တယ်။
” အသေးအဖွဲစာရင်းကအစ ဂရုစိုက်ပါ ”
Make A Full By Drop By Drop!
မြန်မာတွေ တော်တော် သိလိုက်တယ်။
ဒေဝူးကိုရီးယားကုမ္ပဏီ ၊ အောက်ခြေက စကြိုးစားလိုက်တာ ချေးဘိုလ်းလို့ ခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းစုံကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်လာပြီး စျေးကွက်ကို ရနိုင်သမျှ ချဲ့တယ်။သင်္ဘော ထုတ်လုပ်ရေးကနေလျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ စပို့ရှပ်အထိအကုန်ထုတ်တယ်။ နောက်တော့ ပြိုလဲသွားတယ်။
လုပ်ငန်းကိုအဆမတန်တိုးချဲ့ကြိုးစားသော်လည်းမိုးပျံပူပေါင်းလေမှုတ်သလို ကြီးလာပေမယ့်တစ်နေရာမှာပေါက်တာနဲ့ ကျရှုံးတာပဲ။
လုပ်ငန်းကို မနိုင်ပဲ အလောတကြီး မတိုးချဲ့ပါနဲ့။
” စားနိုင်သလောက်သာ မျိုပါ ”
Bigger Is Danger!
မူရင်း Post ပိုင်ရှင် နဲ့ photo ပိုင်ရှင်အားလေးစားလျှက်-
ေအာင္ျမင္တဲ့ စြန႔္ဦးတီထြင္သူတို႔၏ သင္ ခန္းစာယူဖြယ္ အမွားမ်ား
ေက်ာင္းစာသင္ဘူးသူတိုင္းသိတယ္။သေဘၤာေျပးဆြဲေရးမွာ အဂၤလိပ္ကုမၸဏီေတြနဲ႕ ၿပိဳင္တယ္။သေဘၤာစီးခကို အၿပိဳင္ အဆိုင္ေလွ်ာ့တယ္။အလကားတင္ေပးတယ္။လက္ေဆာင္ပါေပးတယ္။
ဦးနာေအာက္ရဲ႕ အမ်ိဳးသားစိတ္ဓာတ္ကို ေလးစားေပမယ့္ခရီးသည္ေတြကို အ မ်ိဳးသားေရးခ်မျပနိုင္ဘူး။ခရီးသည္ကသာရာကပ္တယ္။ေနာက္ေတာ့အင္အားေတာင့္တင္းတဲ့ကုမၸဏီေတြကို မယွဥ္နိုင္ေတာ့ပဲၿပိဳင္ဘက္ဆီလုပ္ငန္းလႊဲေရာင္းလိုက္ရတယ္။
” အင္အားႀကီးၿပိဳင္ဘက္ကို ထိပ္တိုက္ မၿပိဳင္ပါနဲ႕ ”
ကမာၻေက်ာ္အဆိုေတာ္ ၊ ခရီးသြားရင္ ေလယာဥ္သုံးစီး ၊ Bodyguard ေတြနဲ႕ ပြဲတစ္ပြဲဆိုၿပီးရင္ေဒၚလာသန္းခ်ီရတယ္။ ဘာကိုမွမူစရာမလို။စိတ္ႀကိဳက္ သုံးနိုင္တယ္။ကမာၻပတ္နိုင္ခဲ့တယ္။
ေနာက္ေတာ့ ကုမၸဏီစာရင္းေတြ ဘဏ္စာရင္းေတြရႈပ္လာၿပီး ေဒဝါလီ ခံလိုက္ရတယ္။သုံးမကုန္တဲ့ေငြေတြဘယ္ေရာက္သြားသလဲ။
စာရင္းဇယားမနိုင္သူ ၊ စာရင္းဇယားမရွိသူဟာဘယ္ေလာက္ေအာင္ျမင္ေသာ္ လည္းက်ရႈံးရတတ္တယ္။
” အေသးအဖြဲစာရင္းကအစ ဂ႐ုစိုက္ပါ ”
ျမန္မာေတြ ေတာ္ေတာ္ သိလိုက္တယ္။
ေဒဝူးကိုရီးယားကုမၸဏီ ၊ ေအာက္ေျခက စႀကိဳးစားလိုက္တာ ေခ်းဘိုလ္းလို႔ ေခၚတဲ့လုပ္ငန္းစုံကုမၸဏီႀကီးျဖစ္လာၿပီး ေစ်းကြက္ကို ရနိုင္သမွ် ခ်ဲ့တယ္။သေဘၤာ ထုတ္လုပ္ေရးကေနလွ်ပ္စစ္ပစၥည္း၊ စပို႔ရွပ္အထိအကုန္ထုတ္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ၿပိဳလဲသြားတယ္။
လုပ္ငန္းကိုအဆမတန္တိုးခ်ဲ့ႀကိဳးစားေသာ္လည္းမိုးပ်ံပူေပါင္းေလမႈတ္သလို ႀကီးလာေပမယ့္တစ္ေနရာမွာေပါက္တာနဲ႕ က်ရႈံးတာပဲ။
လုပ္ငန္းကို မနိုင္ပဲ အေလာတႀကီး မတိုးခ်ဲ့ပါနဲ႕။
” စားနိုင္သေလာက္သာ မ်ိဳပါ ”
မူရင္း Post ပိုင္ရွင္ နဲ႕ photo ပိုင္ရွင္အားေလးစားလွ်က္-
ကိုယ်တိုင်ကူညီမွေးပေးခဲ့တဲ့‌ မွေးကင်းစကလေးငယ်ကိုကြည့်ပြီး ချစ်မဝဖြစ်နေတဲ့ ပိုးမမှီသာ
မျက်နှာရှင်းရှင်းလေးနဲ့ ကြည်လင်စွာလှတဲ့ မင်းသမီးချောလေး ပိုးမမှီသာကို လူကြီး လူငယ်ပရိသတ်တိုင်း သိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ ပိုးမမှီသာက စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ရဲ့ မြေတောင်မြှောက်ပေးမှုနဲ့ အနုပညာလောကထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး သူမရဲ့
ပထမဦးဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ ပိတောက်ကတဲ့ဂီတရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ အကြီးအကျယ်ရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ ရပ်ဆိုင်းထားပေမယ့် ဆရာဝန်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့
ပိုးမမှီသာကတော့ ဂျူတီကျရာဆေးရုံမှာ တာဝန်တွေကို နေ့ရော ညပါ ထမ်းဆောင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ဟောက်ဆာဂျင်ဆရာဝန်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ပိုးမမှီသာက ဒီနေ့မှာတော့ သူမကိုယ်တိုင် ပါဝင်ကူညီပြီး မွေးပေးခဲ့ရတဲ့ မွေး
ကင်းစကလေးလေးနဲ့ ပုံကို သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကနေတဆင့် မျှဝေပေးထားပါတယ်။ ပိုးမမှီသာက ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ကလေးလေးကို သူမရဲ့လက်ပေါ်တင်ပြီး ချစ်လို့မဝနိုင်ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ပိုးမမှီသာကတော့
သွားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်သွားမှာဖြစ်ပြီး သူမဝါသနာပါတဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း ဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ပိုးမမှီသာရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို
မ်က္ႏွာရွင္းရွင္းေလးနဲ႕ ၾကည္လင္စြာလွတဲ့ မင္းသမီးေခ်ာေလး ပိုးမမွီသာကို လူႀကီး လူငယ္ပရိသတ္တိုင္း သိၿပီးသား ျဖစ္မွာပါ။ ပိုးမမွီသာက စိုင္းစိုင္းခမ္းလွိုင္ရဲ႕ ေျမေတာင္ျမႇောက္ေပးမႈနဲ႕ အႏုပညာေလာကထဲကို ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး သူမရဲ႕
ပထမဦးဆုံး႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားျဖစ္တဲ့ ပိေတာက္ကတဲ့ဂီတ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးနဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈေတြ အႀကီးအက်ယ္ရရွိပိုင္ဆိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ အႏုပညာလုပ္ငန္းေတြ ရပ္ဆိုင္းထားေပမယ့္ ဆရာဝန္မေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့
ပိုးမမွီသာကေတာ့ ဂ်ဴတီက်ရာေဆး႐ုံမွာ တာဝန္ေတြကို ေန႕ေရာ ညပါ ထမ္းေဆာင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ေဟာက္ဆာဂ်င္ဆရာဝန္မေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ပိုးမမွီသာက ဒီေန႕မွာေတာ့ သူမကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ကူညီၿပီး ေမြးေပးခဲ့ရတဲ့ ေမြ
ကင္းစကေလးေလးနဲ႕ ပုံကို သူမရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာကေနတဆင့္ မွ်ေဝေပးထားပါတယ္။ ပိုးမမွီသာက ခ်စ္စရာေကာင္းလြန္းတဲ့ ကေလးေလးကို သူမရဲ႕လက္ေပၚတင္ၿပီး ခ်စ္လို႔မဝနိုင္ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ပိုးမမွီသာကေတာ့
သြာားဖြားမီးယပ္အထူးကုဆရာဝန္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ရပ္တည္သြားမွာျဖစ္ၿပီး သူမဝါသနာပါတဲ့ အႏုပညာလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ဆက္လက္လုပ္ကိုင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ႀကီးလည္း ပိုးမမွီသာရဲ႕ အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈေတြကို
ဘိုကလေးတွင် အသက် ၉ နှစ်အရွယ်ကလေး ၁ ဦးမိချောင်းဆွဲခံခဲ့ရ
June 29, 2020 by Shwengwe Games
ကျော်လင်း/ဧရာဝတီတိုင်းမ်ဘိုကလေး ၊ ဇွန်လ ၂၉ ရက်။
ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဘိုကလေးမြို့နယ်၊ ဂရမ်းကျေးရွာ အုပ်စု၊ ရွာသစ်ကျေးရွာ ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့ (ယနေ့) နံနက်ပိုင်းက အသက် ၉ နှစ်အရွယ် ကလေး ၁ ဦး မိချောင်းဆွဲခံရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အသက် ၉ နှစ်အရွယ်ရှိ မယမင်းသူသည် အဘွားဖြစ်သူနှင့်အတူ နေအိမ်နှင့် ၉ ပေအကွာ ရေမြောင်း အတွင်း ရေချိုးနေစဉ် အလျား ၁၀ တောင်ခန့်ရှိ အဝါရောင်မိချောင်းမှာကလေးအားကိုက်ဆွဲယူခြင်းဖြစ်ကြောင်း မိသားစုဝင်များထံမှ သိရသည်။
“ကျမတွေ့လိုက်ဆို လန့်လည်းလန့် ကြောက်လည်းကြောက်ကလေးပါသွားမှာလည်းစိုးရိမ်တော့ကလေးကို ဆွဲပြီးအတင်းအော်တာပေါ့ သူ့အဖေနဲ့သူ့အဖိုးပြေးဆင်းလာလို့ဝိုင်းဆွဲအတင်းပဲကန်ကြောက်တော့မှကလေးကိုလွှတ်ပြီးဆင်းသွားတာ” ဟုအဖွားဖြစ်သူဒေါ်သန်းဝင်းမှ ဧရာဝတီတိုင်းမ်သို့ပြောသည်။
မိချောင်းအဆွဲခံရစဉ် အဖွားဖြစ်သူမှ ကလေးအားဆွဲပီးအော်ဟစ်အကူညီတောင်းခံခဲ့ရာကလေး၏ ဖခင် နှင့် အဘိုးဖြစ်သူတို့လာရောက်ကူဆွဲခဲ့သဖြင့် မိချောင်းမှာ ကလေးကိုလွှတ်ပြီး ပြန်ဆင်းသွားခဲ့သော်လည်း မိချောင်းဆွဲခံရမှုကြောင့်ကလေးတွင်ဘယ်လက်ဖျံရိုးကျိုး ပြတ်ရှဒါဏ်ရာများရရှိ၍ ဘိုကလေးဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ထားရကြောင်း မိသား စုဝင်များထံမှ သိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့ ရွာမှာဒါပထမဆုံး မိချောင်းအဆွဲခံရတာပါတခါမှလဲမကြုံဘူးတော့အတတ်နိူင်ဆုံးဆေးရုံရောက်အောင်အမြန်အကူအညီပေးဆောင်ရွက်လိုက်ရပါတယ်ဒဏ်ရာကတော့အပြင်းသားကွဲသွားတာလဲအကြီးကြီး၊ အရိုးလဲကျိုးသွားတော့ခွဲစိတ်ခန်းထပ် ဝင်ရမယ်လို့သိရပါတယ်”ဟု ကျေးရွာအုပ်ချူပ်ရေးမှူးဦးသိန်းဝင်းမှ ဧရာဝတီတိုင်းမ်သို့ ပြောသည်။
ယခုရာသီချိန်မှာ မိချောင်းများ အသိုက်ကိုက်သည့်ရာသီဖြစ်ပြီး မတ်လကုန်မှစတင်ကာ မိချောင်းအန္တရယ်သတိပေး လက်ကမ်းကြော်ညှာဝေငှခြင်း ရွာစဉ်လှည့်ကြော်ညာခြင်းများကို နှစ်စဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ဂရမ်းကျေးရွာ အုပ်စု၊ရွာသစ်ကျေးရွာတွင် မိချောင်းအန္တရယ်သတိပေးဆိုင်းဘုတ်ဆိုက်ထူထားပေးကြောင်း ၎င်းကဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
ဘိုကလေးမြို့နယ်၌ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် မိချောင်အကိုက်ခံရမူမှာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကြောင်း သဘာဝဝန်းကျင်နှင့်သားငှက်တိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးဌာန၊မိန်းမလှကျွန်းတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တောအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးသန့်ဇင်အောင်ထံမှသိရသည်။
မိချောင်းအဆွဲခံရ၍ ဆေးရုံတက်ရောက်ဆေးကုသနေရသည့်အသက် ၉ နှစ်အရွယ်မယမင်းသူအတွက် သဘာဝ ဝန်းကျင်နှင့်သားငှက်တိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးဌာန၊မိန်းမလှကျွန်းတောရိုင်းတိရ စ္ဆာန်ဘေးမဲ့တောအုပ်ချုပ်ရေးမူးဦးသန့်ဇင်အောင်နှင့်ဝန်ထမ်းများမှထောက်ပံ့ငွေကျပ် ၅၀၀၀၀ အားဆေးရုံသို့သွားရောက်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဓာတ်ပုံ – ကျော်လင်း (ဘိုကလေး)
မှိုနှင့်ကြက်သားစားပြီး ကိုလာသောက်မိသဖြင့်အစာအဆိပ်သင့်ပြီး လူ ၄ ဦးအနက် ၂ ဦးသေဆုံး
ယခု သတင်းကို (ရွှေတြိဂံဒေသသတင်းလွှာ ) စာမျက်နှာမှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်
တောင်ကြီး၊ ဇွန် ၂၉ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ တောင်ကြီးမြို့၊သစ်တောရပ်ကွက်ရှိနေအိမ်တစ်အိမ်မှာဇွန်လနောက်ဆုံးပါတ်အတွင်းကမှိုဟင်း၊ကြက်သားနဲ့ ကိုကာကိုလာချက်ပြုတ်စားသုံးရာမှအစာအ ဆိပ်သင့်ပြီးအမျိုးသမီးနှစ်ဦးသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသစ်တောရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးထံမှသိရပါတယ်။
သစ်တောရပ်ကွက်၊ ဇောတိကလမ်းရှိနေအိမ်တစ်လုံးမှ မိသားစုဝင်တွေက ဇွန်လ၂၂ရက်ကရွှေဘုန်းပွင့်တောင်ပေါ်သို့သွားရောက်ရာမှမှိုတွေတွေ့ရှိတဲ့အ တွက်နေအိမ်သို့ ယူဆောင်လာကာ နေ့လည်စာချက်ပြုတ်စားသုံးခဲ့ပြီး ညနေစာအဖြစ် ကြက်သားနဲ့ ကိုကာကိုလာအချိုရည်ကိုတွဲဖက်ကာချက်ပြုတ်စားသုံးခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
“ကျွန်တော်သိရသလောက်က စဖြစ်တဲ့ နေ့ပိုင်းအချိန်ကတော့ ဘာမှလက္ခဏာမပြဘူးလို့ပြောတယ်။ညရောက်မှ ကြက် သားနဲ့ကိုကာကိုလာချက်စားပြီး မိနစ် ၃၀လောက်နေတော့ ဗိုက်နာလာတယ်။ ဝမ်းတွေသွားကြတယ်။ အော့အန်လာကြတယ်။ဆေးရုံမှာတစ်ပါတ်လောက်ကြာပြီးတော့တစ်ယောက်က စပြီးတော့ ဆုံးတယ်။သုံးရက်နေတော့သူ့အဒေါ်ကို သဂြိုလ်မယ့်ရက်မှာသူ့တူမက ထပ်ပြီးတော့ ဆုံးတယ်။ သူ့တူမကိုတော့ မနေ့က သဂြိုလ်တယ်လို့တော့ သိရပါတယ်”လို့ သစ် တောရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ရွှေတြိဂံဒေသ သတင်းဌာနကို ပြောပါတယ်။
အဲဒီလိုအစာအဆိပ်သင့်မှုကြောင့် အမျိုးသမီး(၄)ဦးကို ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ကုသခဲ့ပေမယ့် နှစ်ဦးသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးသေဆုံးသူနှစ်ဦးအနက် အသက် (၇၃)နှစ်အရွယ်ရှိ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ဇွန်လ (၂၅)ရက်က သေဆုံးခဲ့ကာ
အသက်(၄၀)ကျော်အရွယ်ရှိ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ဇွန်လ (၂၇)ရက်က သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း၊သေဆုံးသူတွေကိုတောင် ကြီးမြို့၊ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံသုဿန်သို့ ပို့ဆောင်သဂြိုလ်ထားကြောင်း သိရပါတယ်။
မွိုႏွင့္ၾကက္သားစားၿပီး ကိုလာေသာက္မိသျဖင့္အစာအဆိပ္သင့္ၿပီး လူ ၄ ဦးအနက္ ၂ ဦးေသဆုံး
ယခု သတင္းကို ( ေ႐ႊ ႀတိဂံ ေဒသ သတင္းလႊာ ) စာမ်က္ႏွာမွ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ မွ်ေဝ တင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္
ေတာင္ႀကီး၊ ဇြန္ ၂၉ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊သစ္ေတာရပ္ကြက္ရွိေနအိမ္တစ္အိမ္မွာဇြန္လေနာက္ဆုံးပါတ္အတြင္းကမွိုဟင္း၊ၾကက္သားနဲ႕ ကိုကာကိုလာခ်က္ျပဳတ္စားသုံးရာမွအစာအ ဆိပ္သင့္ၿပီးအမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးေသဆုံးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းသစ္ေတာရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးထံမွသိရပါတယ္။
သစ္ေတာရပ္ကြက္၊ ေဇာတိကလမ္းရွိေနအိမ္တစ္လုံးမွ မိသားစုဝင္ေတြက ဇြန္လ၂၂ရက္က ေ႐ႊဘုန္းပြင့္ေတာင္ေပၚသို႔သြားေရာက္ရာမွမွိုေတြေတြ႕ရွိတဲ့အ တြက္ေနအိမ္သို႔ ယူေဆာင္လာကာ ေန႕လည္စာခ်က္ျပဳတ္စားသုံးခဲ့ၿပီး ညေနစာအျဖစ္ ၾကက္သားနဲ႕ ကိုကာကိုလာအခ်ိဳရည္ကိုတြဲဖက္ကာခ်က္ျပဳတ္စားသုံးခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
“ကြၽန္ေတာ္သိရသေလာက္က စျဖစ္တဲ့ ေန႕ပိုင္းအခ်ိန္ကေတာ့ ဘာမွလကၡဏာမျပဘူးလို႔ေျပာတယ္။ညေရာက္မွ ၾကက္ သားနဲ႕ကိုကာကိုလာခ်က္စားၿပီး မိနစ္ ၃၀ေလာက္ေနေတာ့ ဗိုက္နာလာတယ္။ ဝမ္းေတြသြားၾကတယ္။ ေအာ့အန္လာၾကတယ္။ေဆး႐ုံမွာတစ္ပါတ္ေလာက္ၾကာၿပီးေတာ့တစ္ေယာက္က စၿပီးေတာ့ ဆုံးတယ္။သုံးရက္ေနေတာ့သူ႕အေဒၚကို သၿဂိဳလ္မယ့္ရက္မွာသူ႕တူမက ထပ္ၿပီးေတာ့ ဆုံးတယ္။ သူ႕တူမကိုေတာ့ မေန႕က သၿဂိဳလ္တယ္လို႔ေတာ့ သိရပါတယ္”လို႔ သစ္ ေတာရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေ႐ႊႀတိဂံေဒသ သတင္းဌာနကို ေျပာပါတယ္။
အဲဒီလိုအစာအဆိပ္သင့္မႈေၾကာင့္ အ မ်ိဳးသမီး(၄)ဦးကို ေဆး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္ကုသခဲ့ေပမယ့္ ႏွစ္ဦးေသဆုံးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေသဆုံးသူႏွစ္ဦးအနက္ အသက္ (၇၃)ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ဇြန္လ (၂၅)ရက္က ေသဆုံးခဲ့ကာ
အသက္(၄၀)ေက်ာ္အ႐ြယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ဇြန္လ(၂၇)ရက္က ေသဆုံးသြားခဲ့ေၾကာင္း၊ေသဆုံးသူေတြကိုေတာင္ ႀကီးၿမိဳ႕၊ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံသုႆန္သို႔ ပို႔ေဆာင္သၿဂိဳလ္ထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ရင်သွေးငယ်များခိုလှုံရာ လူငယ်ဖွံံဖြိုကရေး ပရဟိတဂေဟာမှာ ရေစုကန်ဆောက်လုပ်ဖို့ကိုလှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ဖြိုးပြည့်စုံ
ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံကတော့ ဒီနေ့မှာ အလှူလေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ပရိတ်တွေသာဓုခေါ်ဆိုလို့ရအောင် မျှဝေဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ အလှူလေးကတော့ ချင်းပြည်နယ် ကန်ပက်လက်မြို့ ရင်သွေးငယ်များခိုလှုံရာ လူငယ်ဖွံံဖြိုကရေး ပရဟိတဂေဟာမှာ ရေစုကန်ဆောက်လုပ်ဖို့ကိုလှူဒါန်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဖြိုးပြည့်စုံကတော့ ဒီအလှူလေးကို ပြီးခဲ့တဲ့ မွေးနေ့အတွက်ရယ်. အမေဖြစ်သူအတွက်ရယ် ဆရာဖြစ်သူ KAT အတွက်အလှူလေးပြုလုပ်ချင်တာကြောင့် စုထားတဲ့ ငွေ သိန်း(၃၀)ကို လှူဒါန်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖြိုးပြည့်စုံက ရင်သွေးငယ်များခိုလှုံရာ လူငယ်ဖွံံဖြိုကရေး ပရဟိတဂေဟာမှာရှိတဲ့ ကလေးငယ်တွေ ပိုမိုအဆင်ပြေပြီး ဘဝရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်ပါစေလို့လည်း ဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းပေးထားပါသေးတယ်။
ဖြိုးပြည့်စုံက အခုလိုလှူဒါန်းဖြစ်တဲ့ အလှူငွေတွေဟာ သူ့ကို အစဉ်တစိုက်ပံ့ပိုးအားပေးတဲ့ သူတွေရဲ့အလှူငွေတွေဖြစ်တာကြောင့် (၇)ရက်သားသမီးတွေထပ်တူရစေဖို့အမျှပေးဝေထားပါသေးတယ်။ပရိသတ်ကြီးရေ ဖြိုးပြည့်စုံရဲ့ အလှူလေးအတွက် သာဓုခေါ်ဆိုလို့ရအောင်မျှဝေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Source – Phyo Pyae Sone – ဖြိုးပြည့်စုံ
ရင္ေသြးငယ္မ်ားခိုလႈံရာ လူငယ္ဖြံံၿဖိဳကေရး ပရဟိတေဂဟာမွာ ေရစုကန္ေဆာက္လုပ္ဖို႔ကိုလႉဒါန္းေပးခဲ့တဲ့ ၿဖိဳးျပည့္စုံ
ပရိသတ္ေတြရဲ႕အခ်စ္ေတာ္ အဆိုေတာ္ ၿဖိဳးျပည့္စုံကေတာ့ ဒီေန႔မွာ အလႉေလးတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းကို သူ႕ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကေန ပရိတ္ေတြသာဓုေခၚဆိုလို႔ရေအာင္ မွ်ေဝေဖာ္ျပလာခဲ့ပါတယ္။ အလႉေလးကေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕ ရင္ေသြးငယ္မ်ားခိုလႈံရာ လူငယ္ဖြံံၿဖိဳကေရး ပရဟိတေဂဟာမွာ ေရစုကန္ေဆာက္လုပ္ဖို႔ကိုလႉဒါန္းေပးခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ၿဖိဳးျပည့္စုံကေတာ့ ဒီအလႉေလးကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမြးေန႔အတြက္ရယ္. အေမျဖစ္သူအတြက္ရယ္ ဆရာျဖစ္သူ KAT အတြက္အလႉေလးျပဳလုပ္ခ်င္တာေၾကာင့္ စုထားတဲ့ ေငြ သိန္း(၃၀)ကို လႉဒါန္းေပးခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ၿဖိဳးျပည့္စုံက ရင္ေသြးငယ္မ်ားခိုလႈံရာ လူငယ္ဖြံံၿဖိဳကေရး ပရဟိတေဂဟာမွာ႐ွိတဲ့ ကေလးငယ္ေတြ ပိုမိုအဆင္ေျပၿပီး ဘဝရည္မွန္းခ်က္ေတြေအာင္ျမင္ပါေစလို႔လည္း ဆုမြန္ေကာင္းေတြေတာင္းေပးထားပါေသးတယ္။
ၿဖိဳးျပည့္စုံက အခုလိုလႉဒါန္းျဖစ္တဲ့ အလႉေငြေတြဟာ သူ႕ကို အစဥ္တစိုက္ပံ့ပိုးအားေပးတဲ့ သူေတြရဲ႕အလႉေငြေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ (၇)ရက္သားသမီးေတြထပ္တူရေစဖို႔အမွ်ေပးေဝထားပါေသးတယ္။ CeleGabar ပရိသတ္ႀကီးေရ ၿဖိဳးျပည့္စုံရဲ႕ အလႉေလးအတြက္ သာဓုေခၚဆိုလို႔ရေအာင္မွ်ေဝေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
Source – Phyo Pyae Sone – ၿဖိဳးျပည့္စုံ
စစ်ကိုင်းခရိုင်၊မြောင်မြို့နယ်၊ ဆင်ဂေါင်းတောင်သာသနာ့နယ်မြေအတွင်းမှာကမ္ဘာ့ပထမဆုံးသောအင်ကြင်းစေတီတော်ကို တည်ထားပူဇော်လျက်ရှိတယ်လို့ ဂေါ ပကအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အင်ကြင်းကျောက်တွေနဲ့ တည်ထားတဲ့ မဟာနာဂဒီပအေးငြိမ်းချမ်းသာဘွဲ့အမည်ရှိ အင် ကြင်းစေတီတော်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် မေလအတွင်းကစတင်တည်ထားခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီးနေပြီးကုန် ကျငွေအနေနဲ့ ကျပ်သိန်းနှစ်သောင်းခန့်ကုန်ကျမယ်လို့တည်ဆောက်ရေးဂေါပကအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဦးမြင့်သိန်းက ပြောပါတယ်။
”အင်ကြင်းစေတီတော်မြတ်ကြီးဟာ မြန်မာနိုင်ငံတင်မဟုတ်ပါဘူးကမ္ဘာ့မှာတင်တစ်ဆူထဲပဲရှိပါတယ်။အခု တည် ထားလျက်ရှိတာငါးနှစ်ရှိပါပြီ၊ ပုဂံက အာနန္ဒာစေတီတော်ပုံစံတူတည်ထားလျှက်ရှိပါတယ်။ကျန်စစ်သားမင်းသားက ကျွန်တော်တို့ိ မြောင်မြို့နယ်၊ပရိမ္မရွာမှာ မွေးဖွားတဲ့အတွက် ကျန်စစ်သားမင်းကြီးကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်အင်ကြင်းစေတီတော်မြတ်ကြီးကို တည်းထားကိုးကွယ်ပါတယ်။
ဒီအင်ကြင်းစေတီတော်ကို လာရောက်ဖူးမျှော်တဲ့အခါမှာအေးမြသာယာတယ် ကျန်းမာဝဖြိုးတယ်အနှောက်အယှက်ရောဂါခပ်သိမ်းကင်းငြိမ်းတဲ့အင်ကြင်းရဲ့ တန်းခိုးကအဲ့တာရှိတဲ့အတွက်တည်ထားကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်” လို့ ‌ဦးမြင့်သိန်းကပြောပါတယ်။မဟာနာဂဒီပအေးငြိမ်းချမ်းသာအင်ကြင်းစေတီတော်မြတ်ကြီးကိုအင်ကြင်းကျောက်တွေနဲ့ကပ်လှူပူဇော်ရာမှာအင်ကြင်းကျောက်တန်ချိန် (၁၀၀၀) ခန့်အသုံးပြုပူဇော်လျက်ရှိပြီး စေတီတော်ရဲ့ဉာဏ်တော်အမြင့် (၄၅) တောင် ၊အလျားပေ (၉၀) ပတ်လည်ရှိပါတယ်။
စေတီရဲ့ လှိုင်အမြင့် (၂၅) ပေ ထုထည်ရှိပြီး စေတီတော်အတွင်းမှာ အလျားပေ (၂၀)၊ လုံးပတ် ၆ ပေ ခန့်ရှိတဲ့အင်ကြင်းသားတွေကိုအသုံးပြုကာပွင့်တော်မူပြီးသော ဘုရားလေးဆူကို ရည်းစူးကာ ရပ်တော်မူရုပ်ပွားတော်တွေ၊ထိုင်တော်မူ ရုပ်ပွားတော်တွေကို ထုဆစ်ပူဇော်ထားရှိထားတယ်တာဖြစ်တယ်လို့ ဦးမြင့်သိန်းကရှင်းပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Photo – Kyaw Swar Soe , မောင်တာရာ (VOM)
စစ္ကိုင္းခရိုင္၊ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္ေဂါင္းေတာင္သာသနာ့နယ္ေျမအတြင္းမွာကမာၻ႔ပထမဆုံးေသာအင္ၾကင္းေစတီေတာ္ကို တည္ထားပူေဇာ္လ်က္ရွိတယ္လို႔ ေဂါပကအဖြဲ႕ကေျပာပါတယ္။အင္ၾကင္းေက်ာက္ေတြနဲ႕ တည္ထားတဲ့ မဟာနာဂဒီပေအးၿငိမ္းခ်မ္းသာဘြဲ႕အမည္ရွိ အင္ ၾကင္းေစတီေတာ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းကစတင္တည္ထားခဲ့ၿပီးလက္ရွိမွာေတာ့ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးေနၿပီးကုန္ က်ေငြအေနနဲ႕ က်ပ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းခန႔္ကုန္က်မယ္လို႔တည္ေဆာက္ေရးေဂါပကအဖြဲ႕ ဥကၠဌ ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာပါတယ္။
”အင္ၾကင္းေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးဟာ ျမန္မာနိုင္ငံတင္မဟုတ္ပါဘူးကမာၻ႔မွာတင္တစ္ဆူထဲပဲရွိပါတယ္။အခု တည္ ထားလ်က္ရွိတာငါးႏွစ္ရွိပါၿပီ၊ ပုဂံက အာနႏၵာေစတီေတာ္ပုံစံတူတည္ထားလွ်က္ရွိပါတယ္။က်န္စစ္သားမင္းသားက ကြၽန္ေတာ္တို႔ိ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ပရိမၼ႐ြာမွာ ေမြးဖြားတဲ့အတြက္ က်န္စစ္သားမင္းႀကီးကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္အင္ၾကင္းေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကို တည္းထားကိုးကြယ္ပါတယ္။
ဒီအင္ၾကင္းေစတီေတာ္ကို လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္တဲ့အခါမွာေအးျမသာယာတယ္ က်န္းမာဝၿဖိဳးတယ္အေႏွာက္အယွက္ေရာဂါခပ္သိမ္းကင္းၿငိမ္းတဲ့အင္ၾကင္းရဲ႕ တန္းခိုးကအဲ့တာရွိတဲ့အတြက္တည္ထားကိုးကြယ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ‌ဦးျမင့္သိန္းကေျပာပါတယ္။မဟာနာဂဒီပေအးၿငိမ္းခ်မ္းသာအင္ၾကင္းေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးကိုအင္ၾကင္းေက်ာက္ေတြနဲ႕ကပ္လႉပူေဇာ္ရာမွာအင္ၾကင္းေက်ာက္တန္ခ်ိန္ (၁၀၀၀) ခန႔္အသုံးျပဳပူေဇာ္လ်က္ရွိၿပီး ေစတီေတာ္ရဲ႕ဉာဏ္ေတာ္အျမင့္ (၄၅) ေတာင္ ၊အလ်ားေပ (၉၀) ပတ္လည္ရွိပါတယ္။
ေစတီရဲ႕ လွိုင္အျမင့္ (၂၅) ေပ ထုထည္ရွိၿပီး ေစတီေတာ္အတြင္းမွာ အလ်ားေပ (၂၀)၊ လုံးပတ္ ၆ ေပ ခန႔္ရွိတဲ့အင္ၾကင္းသားေတြကိုအသုံးျပဳကာပြင့္ေတာ္မူၿပီးေသာ ဘုရားေလးဆူကို ရည္းစူးကာ ရပ္ေတာ္မူ႐ုပ္ပြားေတာ္ေတြ၊ထိုင္ေတာ္မူ ႐ုပ္ပြားေတာ္ေတြကို ထုဆစ္ပူေဇာ္ထားရွိထားတယ္တာျဖစ္တယ္လို႔ ဦးျမင့္သိန္းကရွင္းျပေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
Photo – Kyaw Swar Soe , ေမာင္တာရာ (VOM)
သွေးအမျိုးအစားအလိုက် စိတ်နေ သဘောထားများ
Aသွေးလေးတွေအများစုဟာသနားစရာ၊ ချစ်စရာအလွန်ကောင်းကြပါတယ်။သူတို့တွေဟာအပြင်ပန်းမှာခက်ထန်ကြမ်း တမ်းတယ်ထင်ရပေမယ့်အတွင်းစိတ်သဘောထားကတော့အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့ပါတယ်?
A သွေးလေးတွေဟာချစ်သူအပေါ်မှာလည်းကလေးတစ်ယောက်လိုဆိုးနွဲ့ချင်ကြပါတယ်။အချစ်လည်းအရမ်းကြီးပါတယ်။ဒါပေမယ့်အချစ်စိတ်ကြီးတော့ဘယ်လောက်ကြီးတဲ့အပြစ်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ရှည်သည်းခံပြီးနားလည်ခွင့်လွှတ် ပေးနိုင်တဲ့သူတွေပါ။
Aသွေးလေးတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းမချစ်တတ်ဘူး။သူများတကာတွေကိုလည်းတော်ရုံတန်ရုံအထင်မကြီးတတ်ဘူ A သွေးလေးတွေဟာတစ်ခါတစ်လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်o_O ယုံကြည်ဖို့ခက်ခဲနေတတ်တယ်။
A သွေးလေးတွေဟာငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုမြတ်နိုးသူတွေပါ။ညဖြစ်နိုင်ရင်ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းပဲငြိမ်းချမ်းစွာသာသာယာယာနေသွားချင်ကြတဲ့သူတွေပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုမြတ်နိုးပေမယ့်လည်း တောင်းပန်ရမှာကိုတော့သေလောက်အောင်မုန်းတယ်။သူအမှားတစ်ခုလုပ်မိပြီဆိုရင်လည်းနောင်တရမဆုံးဖြစ်နေတတ်တာA သွေးလေးတွေပါ
A သွေးလေးတွေကိုချစ်သူခင်သူလည်းပေါသလို အပေါင်း အသင်းလည်းများပေမယ့်အများအားဖြင့်တစ်ယောက်တည်းနေရတာကိုပဲသဘောကျပြီးတစ်ယောက် တည်းပဲဖစ်နေတတ်ပါတယ်
Aသွေးပိုင်ရှင်လေးတွေကဒေါသကလည်း အရမ်းကြီးတတ်တယ်။ဒါပေမယ့်တော်ရုံတန်ရုံစိတ်မဆိုးတတ်ပါဘူး။စိတ်ကလည်းအရမ်းမြန်တယ်။သူမှန်တယ်ထင်ရင်ဘယ်သူ့ကိုမဆိုရင်ဆိုင်ရဲတယ်။ ဘာမဆိုလုပ်ရဲတယ်။ကိစ္စတစ်ခုကိုလုပ်ချင်ပြီဆိုရင်လည်းဇွတ်လုပ်တတ်တယ်။
သူ့ကိုမခံချင်အောင်၊ဒေါသထွက်အောင်မထိတထိသွားလုပ်တဲ့သူတွေဆိုအရွဲ့ပြန်တိုက်ရ်မှကိုကျေနပ်တယ်။စိတ်တိုနေပြီဆိုရင်တော့မျက်နှာထားကတင်းတင်းနဲ့ တစ်လောကလုံးသူ့လုပ်စာကိုပဲထိုင် စားနေရသလိုဘယ်သူနဲ့မှကိုစကားမပြောချင်တော့ဘူး
A သွေးလေးတွေဟာချစ်သူအပေါ်မှာလည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးထက်ချစ်သူရဲ့ စိတ်ကူးကိုပိုပြီးဦးစားပေးတတ်ကြပါတယ်။ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကိုလည်းလိုတာထက်ပိုပြီးတော့သဝန်တိုတတ်ကြတယ်။ ပြီးတော့စ်ိထဲမှာရှိတိာကုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမပြောရဲကြဘူး
A သွေးလေးတွေဟာချစ်သူကိုအရမ်းချစ်သလောက်မြတ်နိုးသ လောက်ဂရုစိုက်သလောက်ကြင်နာသလောက်တွယ်တာသ လောက်အလေးထားသလောက် နားလည်မှုတွေခွင့်လွှတ်မှုတွေရှိသ လောက်အများအားဖြင့်သူ့ချစ်သူအပေါ်သူပေးနိုင်သလောက်ပြန်မရတတ်ကြပါဘူးAသွေးလေးတွေဟာတစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက်ပိတောက်ဆိုပိတောက်ပါပဲ်
လူပုံကြည့်ရင် ရေခဲတုံးနဲ့ မှားမယ် ခင်ကြည့်ပါခင်လည်းသိပ်မရင်းနှီးတဲ့လူဆိုခပ်တန်းတန်းဘဲမာနကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ပင်ကိုဗီဇကိုကအေးဆေးတာပါလူအများနဲမနေတတ်ဘူးတယောက်တည်းနေရတာသဘောကျတယ်
စကားများတာမကြိုက်သလိုကိုယ်တိုငိကလည်းစကားနည်းတယ်လေသူတို.အမှန်းဆုံးကပူပူညံညံစက်သေနတ်ပစ်တာကျော်ပူသာတာခံနိုင်တယ်နားပူတာတော့မခံနိုင်ဘူးဗျာဆိုသလိုမျိုး တချို.က ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးညံ့တယ်ထင်ကြတယ်မဟုတ်ပါဘူး
အလုပ်တခုလုပ်ရင်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ဖြစ်စေတခြားသူရဲ.အလုပ်ဖြစ်စေစိတ်ပါပါလုပ်ပေးတတ်တယ်ဒါ့ကြောင့်သူတို. လုပ်ဖူးတဲ့နေရာတိုင်းကသူတို.ကိုသဘောကျကျတယ်အလုပ်ပေါ်လည်းသစ္စာရှိတာပေါ့အစားအစာလားဂျေးမများဘူးကျွေးတာနဲ.စားတတ်တယ် ရှိတာနဲ.စားတယ်
စိတ်နေစိတ်ထားကတော့သနားကြင်နာတတ်တာ၂ ယောက်မရှိဘူး ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူကိုတွေ.ရင်အရမ်းကူညီချင်တယ်မတတ်နိုင်လို.သာမကူညီလိုက်ရတာဘဲရှိတယ်ကူညီချင်စိတ်မရှိလို. မကူညီတာတော့မဟုတ်ဘူးသည်းခံတတ်တယ်
ဒေါသကြီးတာကတော့9လောက်ရှိတယ်သူတို.ကိုလျှော့မတွက်နဲ.ပျားတုပ်တာထက်ဆိုးသွားလိမ့်မယ်အငြိုးတော့မကြီးပါဘူးဒီနေ့ပြီးနောက်နေ.ဆိုမေ့ရောပဲပြီးတော့
တော်ရုံနဲ. တော့မပြောတတ်ပါဘူးတော် တော်ပေါက်ကွဲလာမှပါပြောမိပြောရာပြောပိသွားမှသူတို.ဗီဇအရပြန်အားနာနေတတ်ပြန်ရောအဲ့အခါမှအဲ့လူကိုဘယ်လိုပြန်ချော့ရမလည်းစဉ်းစားရတာလည်းအမောပေါ်တင်ကြီးတော့မချော့ချင်ဘူး
ဘာလို.လည်းဆိုမာနကလည်းကြီးတာကိုးမာနကြီးတာကလည်းသူများထက်သာတယ်9လောက်ရှိတာပေါ့မာနကြီးသလောက်အရှက်လည်းကြီးတယ်ဒါ့ကြောင့်တော်ရုံနဲ.ရည်းးစားစကားမပြောဖြစ်ကြဘူးရှက်တာကိုး အဲ့တာဒါက B သွေးပိုင်ရှင် boy or girl တူတူတွေပါဘဲ
သူ.ချစ်ရတဲ့သူထက်တောင်သူ.အပေါ် ပိုချစ်တယ်ဒါပေမယ့် သူ.ချစ်သူကိုယ်တိုင်ကကိုသူ.အချစ်ကို မမြင်တတ်ဘူးဘာလို.လည်းဆိုရင်ထဲရှိတာတခြားအပြင်မှာတကယ်ပြောမိလုပ်မိတာကတခြားဖြစ်နေတာကိုး
အဲ့ဒါကြောင့်တော်တော်သည်းခံနိုင်ပိ B သွေးးတွေကိုတော်တော်နားလည်နိုင်မှရေရှည်တည်တံ့တဲ့အချစ်တခုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ B သွေးကတခြားသွေးတွေထက်သစ္စာရှိတယ်သူ.ချစ်သူကွယ်ရာမှာသစ္စာဖာက်တဲ့ကိစ္စမျိုးမလုပ်မိအောင်ဘယ်သူမှမသိပါဘူးဆိုပြီးလည်း
မလုပ်မိအောင်ထိန်းတယ်အဲ့လိုလုပ်ထားရမှာက်ိုစိတ်မလုံတာ B သွေးအများစုမှာတဖက်သားနားမလည်နိုင်တဲ့အပြုအမူတွေရှိတယ် B သွေးချစ်သူရှိရင်တခုတော့အကြံပေးချင်ပါတယ်သူတို.ကသင့်ကိုမချစ်ဘူးလို. မထင်လိုက်ပါနဲ.
သင့်ထက်တောင်သူတို.က သင့်ကိုပိုချစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်သင့်လိုအမူအရာနဲ. မဖေါ်ပြတတ်တာဘဲရှိတာပါသူတို.ရင်ထဲမှာသင့်ကိုချစ်တဲ့အချစ်တွေနဲ.ပဲပြည့်နေတာပါဆိုးတာက
သူတို. ဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်းမပြတတ်တာပါဘဲသင်ါကိုသင့်ထက်ဘယ်လောက်ချစ်လည်းဆိုတာသင်ကလမ်းခွဲရင်တောင် ပထမ B သွေးရဲ.မာနကြောင့်ရတယ်လေကိစ္စမရှိဘူးပြောပါလိမ့်မယ်
ဒါပေမယ့်သင့်နဲ.တကယ်ပြတ်ရတော့မယ်မှန်းသိရင်သူတို.မှာခြေမကိုင်မိလက်မကိုင်မိနဲ.ကိုယ့်ကိုပြတ်ပါပိပြောတဲ့သူကိုဆွဲထားမိတတ်တဲ့အထိချစ်ကြတာပါတော်ရုံသန်ရုံ နဲ.တော့သူတို.က သင့်ကိုလမ်းစမခွဲပါဘူး
သူတို. အမုန်းဆုံးကသူကသစ္စာရှိသလောက်သင်ကသူ.အပေါ်သစ္စာ မဲ့ခဲ့ရင်တော့သူအသက်လောက်ချစ်နေပါစေသင်ဘယ် လောက်တောင်းပန်တောင်းပန်ဘယ်လောက်သူ.အရှေ.မှာငိုပြနေပါစေသူတို.လက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့အခါကြရင်သူတို. ရဲ.ပြတ်သားမှုက်ိုသင်ကိုယ်တိုင်ကြည့်ပိအံ့သြရတဲ့အထိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်
နောက်ဆုံးတခုက B သွေးအများးစု ဖြစ်ပါတယ်လမ်းလျောက်ရင်လက်ကိုဘယ်နားထားရမှန်းမသိဘူးတခုခုကိုကိုင်ထားရမှနောက်တခုကိုယ်ချစ်သလောက်ကိုယ့်အပေါ်သစ္စာမရှိခဲ့လို မုန်းပြီဟေ့ဆိုသူ.နာမည်တောင်မနည်းပြန်စဉ်းစားရလောက်ကို ပါပဲတဲ့.
#ABသွေးလားအချစ်ကြီးလို့လား(သို့)အစွဲအလမ်း ကြီးလို့လားချစ်သူတွေပေါ်မှာသစ္စာရှိတတ်ကြလို့ကျန်ရစ်ဖြစ်များပြီးအသည်း ကွဲနေတာများတယ်ချစ်သူပေါ်မှာလည်းသစ္စာမဖေါက်သလိုသူတို့ကို လျစ်လျူရှုရင်ဂရူမစိုက်သလိုပြစ်ထားရင်လည်း
မချစ်တော့လို့လားလို့ AB လေးတွေကတွေဝေတတ်ကြတယ်လေသူတို့ကအချစ်ရေးမှာခံစားချက်ကိုသိုဝှက်လေ့မရှိကြလို့လည်းအမြဲတဖက်သားရဲ့လှည့်စားမှုကိုခံရလေ့ ရှိနေတတ်ကြတယ်တဲ့လေ
တွေဝေတတ်တာ ABပါ မသေချာမရေရာတဲ့အနာဂါတ်မနက်ဖြန်တိုင်းအတွက်သူတို့လေးတွေကလေထဲမှာစိတ်ကူးအိမ်မက်လေးတွေကိုအကောင်ထည်ဖေါ်နေတတ်ကြတယ်လေစိတ်ကူးထဲကအတိုင်းအပြင်မှာဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့
ဇွဲလုံလဝိရိယရှိသူတွေထဲမှာအမှတ်ပေးရမယ်ဆို ABလေးတွေကိုလက်ညိုးအရင်ထိုးရလိမ့်မယ်လေဇွဲရှိသူတွေအနေနဲ့ပေါ့ AB တွေကတခြားသွေးတွေလိုမဟုတ်ဘဲလူမှုဆက်ဆံရေးမှာအရော တဝင်မလုပ်တတ်တာသူတို့ရဲ့ပင်ကိုစရိုက်လေးပါ
သီခြားပင်ကိုစတိုင်လေးနဲ့ခပ်အေးအေးလေးနေတတ်ကြတယ်လေအများစုကဒါပေမယ့်သူတို့အရောတဝင်နေထိုင်လေ့ရှိတဲ့သူ် ငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအရင်းတွေကြားမှာတော့ဟာသဥာဏရွှင်တဲ့ လူ ပြက်တစ်ယောက်လို
တပါးသူပျော်ရွှင်အောင်နေတတ်ကြတတ်တယ်တဲ့တိုက်ဆိုင်ရဲ့လား ABလေးတို့ရေ ABတွေက ဂီတကိုအရမ်းမြတ်နိုးတယ် တစ်ယောက်ထဲပြင်းနေချိန်မှာ သံဇဉ်လေးတွေနဲ့feelingလုပ်နေတတ်ကြတယ်
ပျော်စရာရှိပြီဆိုရင်တစ်ယောက်တည်းကြိတ်မပျော်ဘဲသူငယ်ချင်းအပေါင်းသင်းချစ်သူတို့ကိုပျော်ရွှင်မှုကိုဝေမျှပီတိဖြစ်စေတယ်လေဝမ်းနည်းပြီဆို နှစ်ယောက်မရှိဘူး ABတွေက အစွန်းဆုံးရောက်အောင်အားငယ်နေတတ်တတ်တယ်လေ
ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလွယ်လွယ်မပြောတတ်ကြဘူး။သူတို့တကယ်ချစ်မိပြီဆိုလည်းသူတို့ကိုအသုံးချနေမှန်းသိရက်နဲ့ ခွင့်လွတ်နေကြပြန်ရောကဗျာဆန်ဆန်တင်စားရရင်ဆရာလယ်တွင်းသားစောချစ်ရဲ့“ မျက်လုံးမှာအလွမ်းနုတ်ခမ်းမှာ မာန…” ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုနာမည်တူကြတယ်
အမြဲလွမ်းနေတတ်တယ်အဲဒီနောက်မှာမာနကကပ်ပါနေတယ် သူတို့ကိုမလိုတော့ဘူးထင်တဲ့တနေ့တွယ်ကပ်နေမှာတော့မဟုတ်ဘူး သူတို့မာနကဘဲဝမ်းနည်းလွယ်တဲ့သဘောတရားကိုဖုံးကွယ်ထားတယ်။သူတို့အချစ်ကစွဲမက်ဖို့ကောင်းသလိုကြောက်ဖို့လည်း ကောင်းတယ် ။
အကွက်မြင်တယ်စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲနိုင်တယ် သူတပါးအလုပ်ကိုလုပ်ရတာထက်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကိုဘဲပိုစိတ်ဝင်စားကြတယ် အရောင်းအဝယ်ကိုဝါသနာကြီးတယ်ကိုယ့်အားကို ကိုးတယ်ဆိုတာထက်
သူများအောက်မကျို့ချင်တဲ့စိတ်ကပိုအားကြီးတယ်သူတို့ကစပြီးပြိုင်ရတာကိုသိပ်ဝါသနာမပါဘူးဖြစ်သလိုနေတတ်သလို အပျင်းလည်းကြီးချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုသွားပြိုင်ရင်တော့လုံးဝ အ ကြောမခံဘူးအဲ့ဒါကတော့ နေရာမရွေးဘူး
သူတို့ကိုခြေတက်နင်းမိရင်ခေါင်းပြန်နင်းရမှကျေနပ်တယ်ပြီးမှ ငါလွန်သွားသလားတွေးတယ် ။
သဘာဝတရားကိုအမြဲလက်ခံထားတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ဒေါင်ကျကျပြားကျကျနေတယ်ဝတ်တယ်စားတယ် အသစ် အဆန်းကိုစိတ်မဝင်စားလို့တော့မဟုတ်ဘူး အဟောင်းလေးတွေအပေါ် သံယောဇဉ်တွယ်ပြီးမြတ်နိုးနေတဲ့အတွက်
အသစ်ပေါ်တိုင်းဝယ်မသုံးကြဘူး သူငယ်ချင်းတွေ မိသားစုဝင်တွေအတင်းတိုက်တွန်းမှ ဝယ်ဖြစ်ကြတယ် ။သူတို့ဟာ စုတ်တံ တဖတ်ဓားတဖတ်တွေဖြစ်တယ်နုရွပြီဆိုလည်းသိပ်ကို အနုပညာဆန်ပြီး
ကြမ်းတမ်းပြီးဆိုရင်ကျားနာတစ်ကောင်လို တရှူးရှူး တဒိုင်းဒိုင်းဘဲသူတို့ပန်းချီဆွဲနေတာစာရေးနေတာကဗျာစပ်နေတာပန်းအလှထိုးနေတာကိုကြည့်ပြီးစိတ်ရှည်တယ်လို့ ထင်ရပေမဲ့တခါတခါဘာမဟုတ်တဲ့အဆင်မပြေတာလေးနဲ့
စိတ်တိုနေပြန်ရောဒါပေမဲ့အမှန်တရားကိုနားလည်လွယ်သူတွေ ဖြစ်လို့ စိတ်တိုလည်းသိပ်မကြာပါဘူး။သူတို့လုပ်ချင်ရင် မှန်တယ်ထင်ရင်ဘယ်သူ့မှဂရုမစိုက်ကြဘူးတဇွတ်ထိုးနိုင်တယ် သူတို့ကိုဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးနဲ့သွားမပြောနဲ့လုံးဝနာခံမှာမဟုတ်ဘူး အရွဲ့တိုက်ပြီးလုပ်ဖို့ဘဲရှိတယ်လျှော့ပြောကြည့်ပါလားကြိုက်သလားမမေးနဲ့ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရဘဲ။သူတို့အကြောက်ဆုံးကကိုယ်ကျင့်စာရိတ္တနဲ့ပတ်သတ်ပြီးအထင်လွဲမှာအကြောက်ဆုံးဘဲအသက်ချင်းလည်းဖို့ ဝန်မလေးဘူး။
စိတ်မပါပဲ အသေးအဖွဲအလုပ်လေးကအစအပျင်းကြီးတယ်၊ တခါတရံကျအလုပ်အများကြီးကို တစ်ယောက်တည်း မရပ်မနားလုပ်နေတတ်ပြန်ရော။တခါတလေအပျော်ကြီးပျော်နေတယ်လို့ သူများအမြင်မှာနေပြပြီးတစ်ယောက်တည်းနောက်ကွယ်မျက် ရည်ကျကြတယ်။
ဟန်မဆောင်ပွင့်လင်းတတ်တဲ့အခါ ရှိသလို ၊ဟန်ဆောင် တော်ကြတာလည်း O က နံပါတ်(၁)ပါပဲ။အငြင်းသန်ပြီးအရွဲ့တိုက်တတ်တယ်။ O သွေးတွေမာနအလွန်ကြီးပြီးသူများအသနားမခံတတ်ကြဘူး။ကိုယ့်ဒူးကိုချွန်ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးဦးဆောင်တတ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်စိတ်ရှိသူတွေပါ။သူ့တို့မာနကသူများကို မထိခိုက်ပါဘူး၊ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့မာနမျိုးပေါ့၊အပေါင်းအသင်းသူငယ်ချင်းများအပေါ်အလွန်သံယောဇဉ်ကြီးတတ်ကြပြီးသူငယ်ချင်းအတွက်ဆိုကူညီပေးဖို့အမြဲအသင့်ရှိတတ်ကြတယ်။
ငါခင်သလိုသူတို့က မခင်ပါဘူး´လို့လည်းတစ်ယောက်တည်း တွေးကာအားငယ်တတ်ကြတယ်။သူတို့အကြောင်းမသိသူများ Oသွေးတွေကိုအပေါ်ယံခန့်မှန်းရင်မာကြောကြောဘုဆက်ဆက် မို့ မခင်တတ်ကြဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။
တကယ်လက်တွေ့မှာ Oတွေရဲ့စိတ်ကအလွန်နူံညံ့ပြီးခံစားလွယ်တယ်။ချစ်သူနဲ့သူငယ်ချင်းအပေါ်အလွန်အချစ်ကြီးပြီးခွင့်လွှတ် နားလည်ပေးတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အပေါ်ချစ်တယ်ဆိုတာအမြဲ သံသယထားပြီး စိတ်စမ်းလေ့ရှိတယ်၊
အချစ်ကိုမယုံရဲတဲ့သူမျိုးတွေပေါ့၊ဒါကြောင့် Oသွေး ချစ်သူများ စိတ်ရှည်ရှည်ထားပေးဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်။သူတို့စိတ်ကို နားလည်ဖို့အချိန်ယူရလိမ့်မယ်၊တခါတရံအရမ်းသဘောထားကြီးပြပြီး တခါတလေကလေးဆိုးလေးလို့ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့စိတ်ကောက်တတ်ကြတယ်။
O သွေးတွေဟာသူ့ကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူကိုသာသူပြန်ချစ်တတ် ပါတယ်။အချစ်ကိုအလျော်အစားသဘောမျိုးထားတတ်ပြီး တဖတ်သတ်အချစ်မျိုးကိုမလိုလားတဲ့သူတွပါ။စိတ်ဆိုးပြေလွယ်တတ်ပေမဲ့စိတ်မှတ်ကြီးသူတွေပါ။
အမှတ်မထင်မှားမိရင်အမှားကိုတစိမ့်စိမ့်တွေးကာ နောက်မဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမတတ်ကြတယ်။လုပ်ချင်တာလုပ်ရတဲ့ အချိန်မှာတော့ Oသွေးတွေမျက်နှာကကြည့်အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲသူတို့လုပ်ရပ်အတွက်ဘယ်တော့မှ နောင်တမရတတ်ကြတဲ့ ခေါင်းမာသူတွေပေါ့။
အခြေအနေအရ လှူဒါန်းမှုသာအဓိကမို့ ဘယ်သူ့ကိုမျှဖိတ်ကြားခြင်းမပြုပဲမိသား စုလေးနဲ့ပဲ မင်္ဂလာဦး ဆွမ်းကျွေးအလှူလေး ပြုလုပ်ခဲ့ရတာပါ ဆိုတဲ့ “အိမ့်ချစ်”
အဆိုတော် အိမ့်ချစ်ကတော့ ပရိသတ်အကြိုက် သီချင်းကောင်းလေးတွေ သီဆိုရင်း အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိပိုင်ဆိုင်လာသူလေး ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ့်ချစ်က ပြီးခဲတဲ့ ဇွန်လ (၆) ရက်နေ့မှာ သူမရဲ့ ချစ်သူ ကို Eric နဲ့ မင်္ဂလာလက် မှတ်ထိုးပြီးလက်ထပ်ခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကတော့အိမ့်ချစ်တစ်ယောက် မပြောမဆိုနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့တာကြောင့် အံ့သြဝမ်းသာနေတာပဲ ြဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့မှာလည်းအိမ့်ချစ် ဟာ မင်္ဂလာဦး ဆွမ်းကျွေးပုံရိပ်လေးတွေကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ် တွေကို မျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။
မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကျွေးအလှူအဖြစ် ၂၇.၆.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင်..အေးချမ်းအောင်မြင်အုတ်ခွက်ဘုရားကျောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်နှင့်တကွသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့အားနေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်း ခဲ့ပါသည်။(အခြေအနေအရ လှူဒါန်းမှုသာအဓိကမို့ မည်သူ့ကိုမျှ
ဖိတ်ကြားခြင်းမပြုပဲ မိသားစုနဲ့သာဆွမ်းကပ်ခဲ့တာပါ)ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ကြည်နူးစရာ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ အတူ ရေးသားထားပါတယ်။
အိမ့်ချစ်ကို ချစ်ခင် အားပေးတဲ့ ပရိသတ် တွေလည်း အိမ့်ချစ် ရဲ့ ကြည်နူးဖွယ် ပုံရိပ်လေးတွေကြည့်ပြီး ကျေနပ်နှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဖက်ရှုသူ ပရိသတ် အားလုံးကိုလည်း Cele Feedက ကေဇူးတင်ပါတယ်နော်…။
Source: Eaint Chit’s Facebook
Writer: Myat- Cele Feed
အေျခအေနအရ လႉဒါန္းမႈသာအဓိကမို႔ ဘယ္သူ႕ကိုမွ်ဖိတ္ၾကားျခင္းမျပဳပဲမိသား စုေလးနဲ႕ပဲ မဂၤလာဦး ဆြမ္းေကြၽးအလႉေလး ျပဳလုပ္ခဲ့ရတာပါ ဆိုတဲ့ “အိမ့္ခ်စ္”
အဆိုေတာ္ အိမ့္ခ်စ္ကေတာ့ ပရိသတ္အႀကိဳက္ သီခ်င္းေကာင္းေလးေတြ သီဆိုရင္း ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိပိုင္ဆိုင္လာသူေလး ျဖစ္ပါတယ္။
အိမ့္ခ်စ္က ၿပီးခဲတဲ့ ဇြန္လ (၆) ရက္ေန႕မွာ သူမရဲ႕ ခ်စ္သူ ကို Eric နဲ႕ မဂၤလာလက္ မွတ္ထိုးၿပီးလက္ထပ္ခဲ့ၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ေတြကေတာ့အိမ့္ခ်စ္တစ္ေယာက္ မေျပာမဆိုနဲ႕ လက္ထပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ အံ့ၾသဝမ္းသာေနတာပဲ ျျဖစ္ပါတယ္။
ယေန႕မွာလည္းအိမ့္ခ်စ္ ဟာ မဂၤလာဦး ဆြမ္းေကြၽးပုံရိပ္ေလးေတြကို ခ်စ္တဲ့ ပရိသတ္ ေတြကို မွ်ေဝလာခဲ့ပါတယ္။
မဂၤလာဦးဆြမ္းေကြၽးအလႉအျဖစ္ ၂၇.၆.၂၀၂၀ ရက္ေန႕တြင္..ေအးခ်မ္းေအာင္ျမင္အုတ္ခြက္ဘုရားေက်ာင္းမွာျမတ္စြာဘုရားရွင္ႏွင့္တကြသံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တို႔အားေန႕ဆြမ္းဆက္ကပ္လႉဒါန္း ခဲ့ပါသည္။(အေျခအေနအရ လႉဒါန္းမႈသာအဓိကမို႔ မည္သူ႕ကိုမွ်
ဖိတ္ၾကားျခင္းမျပဳပဲ မိသားစုနဲ႕သာဆြမ္းကပ္ခဲ့တာပါ)ဆိုၿပီး သူမရဲ႕ ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမွာ ၾကည္ႏူးစရာ ပုံရိပ္ေလးေတြနဲ႕ အတူ ေရးသားထားပါတယ္။
အိမ့္ခ်စ္ကို ခ်စ္ခင္ အားေပးတဲ့ ပရိသတ္ ေတြလည္း အိမ့္ခ်စ္ ရဲ႕ ၾကည္ႏူးဖြယ္ ပုံရိပ္ေလးေတြၾကည့္ၿပီး ေက်နပ္ႏွစ္သက္ၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ ဖက္ရႈသူ ပရိသတ္ အားလုံးကိုလည္း Cele Feedက ေကဇူးတင္ပါတယ္ေနာ္…။
အနောက်နိုင်ငံကမော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်ရဲ့ ချီးမွမ်းခံလိုက်ရတဲ့ ပိုင်တံခွန်
အရည်လဲ့နေတဲ့မျက်ဝန်းလေးနဲ့ ချစ်စရာအပြုံးချိုချိုလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူကတော့ပိုင်တံခွန်ပါ။ပိုင်တံခွန်ကတော့ ယောကျာ်းပီသတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြင်ပရိသတ်တွေကိုလည်းအလေးအနက်ထားဆက်ဆံတတ်သူတစ်ယောက်မို့နုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ သည်းသည်းလှုပ်ဝန်းရံအားပေးခြင်းကို ရရှိထားသူတစ်ယောက်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှာသာမကဘဲ ထိုင်းနိုင်ငံမှာပါကြော်ငြာရိုက်ကူးရေးတွေလုပ်လာရတဲ့အထိထိုင်းပရိသတ်လည်း အခိုင် အမာရရှိထားသူတစ်ယောက်ပါ။ မနေ့ကတော့အာရှတဝှမ်းမှာပရိသတ်ရရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ပိုင်တံခွန်တစ်ယောက် အနောက် နိုင်ငံကမော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်ရဲ့ အရမ်းဟော့တဲ့အာရှတိုက်သားလေးလို့ ချီးမွမ်းခြင်းကိုရရှိခဲ့တဲ့ဗွီဒီယို လူမှုကွန်ရက်မှာပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ Instagram နဲ့ Tik Tok မှာပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ မော်ဒယ်လ်လေးကတော့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့ ယောကျ်ားပီသတဲ့ကြွက်သားနဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ်တည်ဆောက်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီး အာရှသားတွေကအရမ်းဟော့တာပဲ ဆိုပြီး Tik Tok ဗွီဒီယိုလေးပြုလုပ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေပိုင်တံခွန်ကတော့ အနု ပညာအလုပ်နဲ့ အောင်မြင်မှုရရှိလာသလို ရရှိလာတဲ့အနုပညာကြေးတွေကိုလည်း အများအပေါ်စိတ်ကောင်းရှိစွာနဲ့ အလှူ အတန်းလုပ် မျှဝေလေ့ရှိသူပါ။ဒါကြောင့်မို့လည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာသာမက နိုင်ငံရပ်ခြားကပရိသတ်တွေကပါသတိထားလာရတဲ့အထိ အောင်မြင်မှုရရှိလာခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ
Source – Su May
အေနာက္နိုင္ငံက ေမာ္ဒယ္လ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ခ်ီးမြမ္းခံလိုက္ရတဲ့ ပိုင္တံခြန္
အရည္လဲ့ေနတဲ့မ်က္ဝန္းေလးနဲ႕ ခ်စ္စရာအၿပဳံးခ်ိဳခ်ိဳေလးေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူကေတာ့ ပိုင္တံခြန္ပါ။ပိုင္တံခြန္ကေတာ့ ေယာက်ာ္းပီသတဲ့ခႏၶာကိုယ္ကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့အျပင္ပရိသတ္ေတြကိုလည္းအေလးအနက္ထားဆက္ဆံတတ္သူတစ္ေယာက္မို႔ႏုတ္ခမ္းနီမေလးေတြရဲ႕ သည္းသည္းလႈပ္ဝန္းရံအားေပးျခင္းကို ရရွိထားသူတစ္ေယာက္ဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။
ဒါ့အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာသာမကဘဲ ထိုင္းနိုင္ငံမွာပါေၾကာ္ျငာရိုက္ကူးေရးေတြလုပ္လာရတဲ့အထိထိုင္းပရိသတ္လည္း အခိုင္ အမာရရွိထားသူတစ္ေယာက္ပါ။ မေန႕ကေတာ့အာရွတဝွမ္းမွာပရိသတ္ရရွိေနၿပီျဖစ္တဲ့ပိုင္တံခြန္တစ္ေယာက္ အေနာက္ နိုင္ငံကေမာ္ဒယ္လ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ အ ရမ္းေဟာ့တဲ့အာရွတိုက္သားေလးလို႔ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကိုရရွိခဲ့တဲ့ဗြီဒီယို လူမႈကြန္ရက္မွာပ်ံ့ႏွံ႕ခဲ့ပါတယ္။ Instagram နဲ႕ Tik Tok မွာပရိသတ္အခိုင္အမာရရွိထားတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ေလးကေတာ့ ပိုင္တံခြန္ရဲ႕ ေယာက်္ားပီသတဲ့ႂကြက္သားနဲ႕ ခႏၶာ ကိုယ္တည္ေဆာက္ပုံေတြကိုၾကည့္ၿပီး အာရွသားေတြကအရမ္းေဟာ့တာပဲ ဆိုၿပီး Tik Tok ဗြီဒီယိုေလးျပဳလုပ္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ပရိသတ္ႀကီးေရပိုင္တံခြန္ကေတာ့ အႏု ပညာအလုပ္နဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈရရွိလာသလို ရရွိလာတဲ့အႏုပညာေၾကးေတြကိုလည္း အမ်ားအေပၚစိတ္ေကာင္းရွိစြာနဲ႕ အလႉ အတန္းလုပ္ မွ်ေဝေလ့ရွိသူပါ။ဒါေၾကာင့္မို႔လည္း ျမန္မာနိုင္ငံမွာသာမက နိုင္ငံရပ္ျခားကပရိသတ္ေတြကပါသတိထားလာရတဲ့အထိ ေအာင္ျမင္မႈရရွိလာခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ ပရိသတ္ႀကီးေရ